तपाईको यो साता हुँदैछ भाग्योदय? पौष ११ गतेदेखि १७ गतेसम्मको राशिफल हेर्नुहोस् – List Khabar
Home / जीवनशैली / तपाईको यो साता हुँदैछ भाग्योदय? पौष ११ गतेदेखि १७ गतेसम्मको राशिफल हेर्नुहोस्
तपाईको यो साता हुँदैछ भाग्योदय? पौष ११ गतेदेखि १७ गतेसम्मको राशिफल हेर्नुहोस्
admin December 24, 2021 जीवनशैली Leaveacomment 427 Views
मेषः इष्टमित्रको साथ र सहयोग बाट गरेको काममा सफलता मिल्ने समय छ । पढाइ प्रति रुची बढेर जाने समय छ । मनमा उल्लास छाउने समय छ । कामको थालनी गर्नको लागि समय अनुकुल रहेको छ । जग्गा जमिनको कारोबारमा सफलता मिल्ने समय रहेको छ । नया ठाउको यात्रामा रमाउने समय रहेको छ । होटल व्यवशाय गर्नेलाई भने घाटाको समय छ । पत्रकारको लागि भने समय मध्यम रहेको छ ।
वृषः घरजग्गाको काम कारोबारमा सहजता छाउने छ । सहकारी तथा संघ सस्थामा सहभागी हुने समय छ । फ्लिमकर्मीको लागि समय लाभ हुनेछ । वकिल तथा शिक्षकको लागि समय अनुकुल रहेको छ । फर्नेचर व्यवशाय फस्टाएर गर्नेका लागि काम धेरै पाइने समय छ । सामुहिक यात्रामा निक्लिन समय उत्तम छ । मावालिहरु सहयोगी हुने समय छ । असहयोगी छिमेकीको समेत साथ र सहयोग मिल्ने देखिन्छ । गरिरहेको व्यवशाय फस्टाएर जानेछ । राजनीतिक क्षेत्रमा समय मध्यम फलदायी रहेको छ ।
मिथुनः सामाजिक काममा समय व्यतित हुनेछ । साहुमहाजनको साथ र सहयोग मिल्नेछ । कलाकारितामा क्षेत्रमा समय सोचे अनुकुल नै रहेको छ । घरायाशी काममा अप-जस खेप्नुपर्ने हुनसक्छ । सहकार्यमा गरेको कामको परिणाम सोचे अनुकुल देखिन्न । चित्रकार तथा मूर्तिकारको लागि समय उत्तम रहेको छ । उद्योग व्यवशाय फस्टाएर जाने समय छ । सुनचादिको कारोबारमा समय लाभदायक रहेको देखिन्छ । खेल क्षेत्र सामान्य रहेको छ । आखाको समस्याले सताउन सक्ने समय छ । स्त्रीको साथ र सहयोग बाट गरेको काममा सफलता हात पर्नेछ ।
कर्कटः अन्तरास्ट्रिय कामहरु सहजै बन्ने समय रहेको छ । माता पिताको सुखमा वृद्दि हुनेछ । व्यापारीको लागि समय उत्तम छ । शेयर व्यवशाय फस्टाएर जाने समय छ । कच्चा पदार्थको व्यवशाय फस्टाएर जाने समय छ । बिलाशिता वस्तुको व्यवशाय फस्टाएर जाने समय आएको छ । आफन्तको सल्लाहबाट गरेको काममा सफलता हात पर्नेछ । तरकारी तथा फलफूल व्यवशाय फस्टाएर जानेछ । घर खरिद विक्रिमा लाभ हुनेछ । शिक्षकको लागि समय उत्तम छ । कृषकको लागि समय अनुकुल रहेको छ । टाउकोको समस्याले सताउन सक्नेछ । बहुमुल्य धातुको व्यवशाय फस्टाएर जाने समय छ । आँखाको समस्याले सताउँन सक्ने समय छ ।
कन्याः बाणिको प्रभाव उच्च हुने समय छ । उच्च स्तरीय भेटघाट हुनेछ । सहकार्यमा गरेको भन्दा एकल गरेको काममा सफलता प्राप्ति गर्न सहज हुनेछ । उच्चस्तरीय भेटघाट हुने समय छ । धार्मिक तथा रमाइलो यात्रा हुने समय छ । घरमा मांगलिक कार्य हुने समय छ । खोज तथा अनुसन्धानात्मक क्षेत्रबाट बढी नै लाभ हुने देखिन्छ । कलाकारिता क्षेत्रमा तपाइको लागि समय उत्तम छ । डाक्टर तथा नर्सकोलागि समय सोचे अनुकुल नै हुनेछ । गैरसरकारी कामबाट राम्रो लाभ हुन सक्ने समय छ । खेल क्षेत्रमा समय अनुकुल रहेको छ । साना तथा मझौला उद्योग व्यवशाय फस्टाएर जानेछ । गरिरहेको व्यवशाय फस्टाएर जाने समय छ ।
तुलाः बादबिबादमा नपरेको नै बेश हुनेछ । सहयोगीहरु पनि तपाइको काममा सहयोग गर्न असक्षम होलान् । विद्यार्थीको लागि समय प्रतिकुल रहेको छ । मिडियाको काममा समय अनुकुल रहेको छ । लामो तथा रमाइलो यात्रामा निक्लिन समय प्रतिकुल रहेको छ । किराना व्यवशाय गर्नेहरुको पेशा फस्टाएर जाने समय छ । निजि क्षेत्रको लगानी खासै लाभ नहोला । स्वास्थ्य समस्याले पिरोल्न सक्ने समय रहेको छ । उनको व्यवशाय फस्टाएर जाने समय छ । शक्ति प्रदर्शन गर्दा समय खासै लाभकारी छैन । सवारी खरिदको लागि समय अनुकुल रहेको छैन । कान दुख्ने समस्याले सताउन सक्ने देखिन्छ ।
वृश्चिकः कला क्षेत्रमा समय अनुकुल रहेको छ । उद्योग तथा पसल व्यवशाय फस्टाएर जाने समय छ । राजनीतिक क्षेत्रमा समय अनुकुल रहेको छ । घरजग्गाको काममा समय अनुकुल रहेको छ । पशुचौपाया तथा दोपाया व्यवशायमा समय अनुकुल रहेको देखिन्छ । आफ्नो निर्णय आफै लिनु गाह्रो हुनेछ । सहकारी तथा बैंकिंग कारोबारबाट लाभ हुनेछ । लेखकको लागि समय अनुकुल रहेको छ । ठुलो कृषि व्यवशाय सामान्य रुपमा जाने समय छ । साथीकै कारण काममा बाधा आउन सक्ने समय आएको छ ।
धनुः खोजमुलक काममा समय अनुकुल रहेको छ । पथ प्रदर्शकको लागि समय अनुकुल रहेको छ । गरिरहेको व्यवशाय फस्टाएर जानेछ । प्रेमी प्रेमिकाको लागि समय अनुकुल रहेको छ । नोकरीमा सन्तुस्टी मिल्ने समय छ । पढाइमा सुधार भएर जाने समय रहेको छ । व्यवशाय फस्टाएर जाने समय छ । घरायासी काममा समय अनुकुल भएर बित्नेछ । शिक्षक तथा वकिलको लागि समय उत्तम छ । अर्थशास्त्रीको लागि समय अनुकुल रहेको छ । घर तथा जग्गा खरिद गर्नकोलागि समय अनुकुल रहेको छ । कपडा व्यवशायबाट मनग्य लाभ हुनेछ ।
मकरः संगीत क्षेत्रमा लागेकाहरुका लागि समय अनुकुल रहेको छ । सामाजिक काममा नेतृत्व लिने समय आएको छ । सुनचाँदिको व्यवशाय फस्टाएर जाने समय छ । मनमा अस्थिरता छाउन सक्ने समय छ । सामुद्रिक यात्रामा जाने योजना बन्न सक्ने समय छ । पुराना काम प्रति हौसला बढ्ने समय आएको छ । दाजुभाई मिलेर गरेको काममा सफलता मिलन सहजता हुनेछ । आम्दानीको नया श्रोतहरु खुल्दै जाने समय छ । मार्केटिंग व्यवशाय फस्टाएर जाने समय देखिन्छ । सवारीसाधन खरिद गर्नको लागि समय उत्तम छ । गुरुको सहयोगमा गरेको काममा समय उत्तम रहने छ । साथीको सहयोगबाट गरेको काममा सहजता छाउनेछ । स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या देखा पर्न सक्छ ।
कुम्भः विलासिता वस्तुको व्यवशाय फस्टाएर जाने समय छ । सहयात्रामा गरेको काममा समय उत्तम छ । सिर्जनात्मक काममा मन जाने समय छ । स्थिर लगानी गर्नको लागि समय अनुकुल रहेको छ । राजनीति पकड बलियो भएर जाने समय छ । फर्नेचर व्यवशाय फस्टाएर जानेछ । बैदेशिक क्षेत्रको यात्रामा निक्लिनको लागि समय उत्तम छ । मित्रतामा भएको क टु ता हटेर जाने देखिन्छ । साना तथा मझौला उद्योग व्यवशाय फस्टाएर जाने समय छ । चिसोबाट जोगिनु होला तथा खानपिनमा ध्यान पुर्याउनुहोला ।
मीनः धार्मिक तथा रमाइलो यात्रामा सरिक हुने समय छ । सरकारी सेवामा रहेकाहरुको लागि समय फलदायी रहेको छ । सेवकबाट सहयोग मनग्य हुन सक्ने समय छ । कलाकार तथा फ्लिमकर्मिको लागी समय अनुकुल रहेको छ । होटल व्यवशाय सोचे अनुकुल रहेको देखिन्न । बिदेश सग सम्बन्धित कुनै पनि कामहरुले सफलता पाउन सहज हुनेछ । सन्तानको स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न हुनसक्ने समय छ । सरकारी तथा निजि कामहरु सहजै बन्ने छन् । पुरानो रोगले छाड्ने समय आएको छ । गरिरहेका उद्योग व्यवशायहरु सामान्य फस्टाएर जानेछन् ।
Previous घर मर्मत गर्न आएका मिस्त्रीसँग दुबै बुहारी फिदा, मौका छोपेर दुबै एकसाथ भागे !
Next चीसोमा बाथरुममा नुहाउदा यी कुरा ख्याल नगरे जान्छ ज्यान, लगातार ३ जनाको मृत्यु